ဟိုး..ရေး... ၅သန်းပြည့်ထရိတ်ဒါကို FBSက ဆုချီးမြှင့်ပေးလိုက်ပြီ!
သတင်းကောင်းဗျို့! မကြာသေးခင်ကပဲ FBSမှာ ထရိတ်ဒါပေါင်း ၅သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်လို့ နံပါတ်တစ်အကျိုးဆောင်ဘရုတ်ကာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ!
၅သန်းပြည့်အဖြစ် မှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည့် အကောင့်ကိုဖွင့်ခဲ့သူကတော့ တူရကီနိုင်ငံမှ Mr. Ferhat Idilဖြစ်ပြီး သူ၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကံထူးရှင်ဖြစ်လာမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားအားလုံးမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုစကားပြောလိုပါသည်.
ထိုကဲ့သို့ သန်းပြည့်ဖောက်သည်တော်များအား ထိုသူတို့ရွေးချယ်ပေးသည့်အရာများအား အထူးလက်ဆောင်အဖြစ် အမှတ်တရအဖြစ် ဆုလက်ဆောင်ပေးအပ်သည့် အစဉ်အလာရှိသည်ဖြစ်ရာ ယခုအကြိမ် ငါးသန်းပြည့်ဖောက်သည်တော်ကတော့ သူလိုချင်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Yamaha N-Max 155 ABSအနက်ရောင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ရွေးချယ်ပေးသွားခဲ့ပါသည်.
ယခုချီးမြှင့်ပေးအပ်လိုက်သည့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Mr. Ferhatအနေနဲ့ FBSမှာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ ယခုလို ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပြီး အမြတ်အစွန်းများ များများရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါသည်!
နံပါတ်တစ်အကျိုးတော်ဆောင်နှင့်အတူ - ရောင်းဝယ်လိုက်ပါ!